अप्रील 7, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments बनस्पती, मांसहारी
बनस्पतिहरु पनि मांसहारी हुन्छन भन्ने कुरा यहाँहरुलाई पत्याउन गाह्रो पर्छ होला तर संसारको केहि भागमा यस्ता बनस्पतीहरु पाइन्छ्न जसले किराहरुलाई आफ्नो आहारा बनाउने गर्दछन । यस्ता बनस्पतीहरुले माटोबाट पोषक पदार्थ प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले आफ्नो शरीरको बिशेष भागबाट किराहरु पक्री किराको शरीरलाई घुलाई त्यसबाट पोषक पदार्थ सोसेर लिने गर्दछ । यस्ता बनस्पतीहरु जानकारी र तस्वीरहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
पिचर प्लान्ट (Pitfall Traps)
यो बनस्पती दक्षिण एसिया र इन्डियन ओसनको वोरिपरी पाइन्छ । यो बनस्पतीमा ढक्कन सहितको थैली हुन्छ जुन थैलीभित्र तरल पदार्थ रहेको हुन्छ। जव किराहरु सो थैलिभित्र प्रबेश गर्दछ तव उक्त थैलीको ढक्कन बन्द हुन्छ जसको कारणले गर्दा किरा भाग्न पाउदैन । थैली भित्र प्रबेश गरेको किरालाई तरल पदार्थले घुलाईदिन्छ र बनस्पतिले किराको शरीरबाट पोषक पदार्थ सोसेर लिन्छ । कुनै कुनै पिच र प्लान्टहरु साना साना किरा मुसा र छेपारोहरुलाई समेत पक्रन सक्ने गरी ठुलो आकारमा बिकाश भएको हुन्छ ।
ब्रोचिनिया रिडुक्टा (Brocchinia Reducta)
यो बनस्पती अस्ट्रेलिया बाहेक अन्य सबै महादेशको चिसो र ओसिलो ठाउमा पाइन्छ । यस्को पातमा गम जस्तो च्याप च्याप लाग्ने पदार्थ हुन्छ र सोही पदार्थमा किराहरु टासिन्छ्न ।
यो बनस्पतिलाई सन्डिउ पनि भनिन्छ । यो रङिन हुन्छ । यो एन्टार्टिका बाहेक सबै महादेशमा पाइन्छ । यसमा टेन्टाकल जस्तो आकृती भएको भाग हुन्छ जस्को काम किरालाई आल्झाउनु हो ।
भेनस फ्लाई ट्र्याप (Venus Fly Trap)
यो बिरुवा अमेरिकामा पाइन्छ। यस्ले आफ्नो काँडेदार ढक्कन भएको पातमा किराहरु छिरेपछी ढक्कन बन्द गरी आहारा बनाउदछ ।
वाटर व्हील प्लान्ट् (Water Wheel Plant)
यो बनस्पती पानीमा पाइन्छ र यस जरा हुँदैन । यसले पनि भेनसाफ्लाई ट्र्यापले जस्तै किरा पकड्दछ ।
ब्ल्याडर वोर्ट (Bladder Worts)
संसारमा २२३ भन्दा बढी जातका ब्ल्याडर वोर्ट बनस्पती पाइन्छ्न। यी बनस्पतीहरु पानी र जमिन दुबै ठाउँमा पाइन्छ । यसले आफ्नो शरीरमा किरालाई पकड्नको लागी अचानक थैली जस्तो आकृती सिर्जना गर्दछ ।
प्यारोट पिचर प्लान्ट (Parrot Pitcher Plant)
यो दक्षिणी अमेरिकामा पाइन्छ । यसले आफ्नो नेक्टरको सहायताले किराहरु पकड्ने गर्दछ ।
लब्स्टर पट ट्र्याप् (Lobosterpot Plant)
यसलाई क्यालिफोर्निया पिच र प्लान्ट वा कोब्रा लिली वा कोब्रा प्लान्ट पनि भनिन्छ । यसको आकृती कोब्रा सर्पको जस्तो हुने भएकोले यसलाई कोब्रा लिली पनि भनिएको हो । यसले पनि मिठो गन्ध निकालेर किरालाई आकर्षित गरी पकड्ने गर्दछ ।
← पृथ्वीमा जीवको बिनाश हुन सक्ने सम्भावनाहरु के कस्ता रहेका छन ?
प्लास्टिकको प्रयोगले वातावरणमा पर्ने हानिकारक प्रभावहरु के के हुन ? →
फ्रेवुअरी 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक 8